Ogaden News Agency (ONA) – Madaxweyne Kibaki oo kula dardaarmay saraakiishiisa feejignaan
Madaxweyne Kibaki oo kula dardaarmay saraakiishiisa feejignaan
Posted by ONA Admin	/ May 21, 2011
Madaxweynaha Kenya mudane Mwai Kibaki ayaa ciidanka qalabka sida ee dalkiisa ugu baaqay inay feejignaadaan oy sugaan nabadda xuduuda kala dhexeysa Itobiya gaar ahaan. Mudane Kibaki ayaa isagoo u xidhaya tababar ciidankiisa xerada Eldoret wuxuu ku yidhi;
“ Bishan horaanteedii waxaa nagaga dhintay dad badan dagaal qabiil Kenya ah iyo kuwa Itobiyaan ah ku dhex maray xadka labada dal u dhexeeya. Waxaan ka codsanayaa saraakiisha inay feejignaadaan si nabadda ay u sugaan iyo xasiloonida halkaa.”
Wuxuu kaloo sheegay in xaaladda Somaliya ay ku tahay khatar nabadda dalka Kenya. Wuxuu xusay inay xaaladda ka sii dareyso ka dib markii hubka fudud oo tira badan uu dalka soo galay isla markaana dha;inyaro Kenyan ah ay ku biireen ururada xag-jireenka ah. Wuxuu sheegay in la dakeynayo xadka si daagalada ka socda dalalkaa aanay u soo gaarin gudaha Kenya.
Waxay Kenya iyo Itobiya yeesheen bishii hore guddi wasiiro oo labada dal ka kooban oo arimaha xadka ka dhaca xaliya iyo sidii ay shucuubta dagan xadka u wada noolaan lahaayeen. Hasa ahaatee Itobiya oo dhac ku nool ah ayaa marwalba waxay ku dhirigalisaa dadkeeda inay u boob tagaan shucuubta ka taagdaran, waana arin dhaqan ahaan ay u lahaayeen.
Wuxuu sheegay MW Kibaki in tan iyo 1990kii uu jiray dagaalo aargoosi ah oo labada shacab ka dhex socday taasoo uu ku tilmaamay inay tahay mid soo noq-noqota.
Wuxuu ugu baaqay saraakiisha ciidankiisa inay muujiyaan adadayga ay ku tuseen dhoola tuskii xidhitaanka tababarkooda marka ay tagaan goobaha uu ka jiro qalalaasaha. Waxaa la’idinka sugayaa buu yidhi saraakiisha iyo ciidanka tababarku u dhamaaday; xirfad iyo disibiliin sare iyo daacad inaad u noqotaan dalkiina Kenya.
wali ilaa hada Kenya way ka gaabinaysaa inay ” YUR” iska tiraahdo waxa itoobiya loo yaqaano ee gumaysiga ah.